BXL Yakagadzira Won Tatu Pentawards Yepasi Pose Kugadzira Mipiro
Mu "Pentawards Festival" kubva 22 - 24 Gunyana 2020, hurukuro dzehurukuro dzakapihwa. Iyo inozivikanwa graphic dhizaini Stefan Sagmeister uye iyo brand & yekugadzira dhizaini director weAmazon USA Daniele Monti vaive pakati pavo. Vakagovana ruzivo rwechizvino mukugadzirwa ...
Gore rino, rinoenderana nekambani yegumi nematanhatu yekambani, BXL Creative yakakokwa neGuizhou Provincial Government kuvaka fekitori kuGuizhou kusimudzira kusimudzira kwehupfumi ikoko. Sekambani inoonga yakanyorwa, ibasa redu kupa kune ...
BXL Yakasikwa Won 4 Packaging Dhizaini Mubairo paiyi Mobius Kushambadzira Mubayiro Makwikwi
BXL Yakagadzira yakahwina "Akanakisa Anoshanda Mubayiro" uye matatu "Goridhe" ekurongedza dhizaini pa2018 Mobius Kushambadzira Makwikwi emakwikwi, achiisa rekodhi rakanakisa mumakore makumi maviri muChina. Ndiwo chete mubayiro unohwina mubairo muAsia. Pfungwa yeiyi dhizaini ndeyekuvaka ...